पछिल्लो समय नेपाली लोकगीतको संगीतको क्षेत्रमा सक्रिय संगीतकार तथा गायक संगीत शर्माले आफू र गायिका देवी घर्तीको स्वरमा पञ्चेबाजा गीत यानीमाया हालै सार्वजनिक गरेका छन्। यानीमाया हो दिलको कसार
हरेक मानिसले कुनै न कुनै रूपबाट प्रकोपको अनुभव गरेको हुन्छ। प्राकृतिक वा अप्राकृतिक घटनाबाट उत्पन्न हुने यस्तै विनाशकारी अवस्थालाई नै प्रकोप भनिन्छ। बाढी, पहिरो, आगलागी, भुइँचालो, हुरीबतास, खडेरी, शीतलहर,
नेपालको राजनीति नेपालभित्रै गर
नेपालको तराई केन्द्रित राजनीतिक पार्टीलगायत अन्य ठूला–साना पार्टीका नेता आफ्नो देशको राजनीतिमा भारतीय नेताहरुको राय–सुझाव तथा संलग्नताका लागि दिल्ली धाउने गरेको कतै छिपेको छैन। यो त देशको सार्वभौम सत्ता
नेपालको संविधानले सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। सूचनाको हक व्यवहारमा छैन। सार्वजनिक निकायको कुनै पनि विषयमा सूचना पाउने हक नेपालको संविधानले नै ग्यारिन्टी गरेको अवस्था हो। आर्थिक अनुशासन र
दुव्र्यसनको समस्या र महिला
एक अध्ययनले देखाएअनुसार नेपालमा पनि झण्डै ३० हजार महिला लागूऔषधको धरापमा परिसकेको अनुमान छ। विकसित देशहरूमा पुरुष र महिला झण्डै समान संख्यामा दुव्र्यसनमा परेको देखिन्छ भने पुरुषप्रधान हाम्रो जस्तो
वनक्षेत्रलाई स्थानीय तहभित्र राख्न हुँदैन
इलामको दरबारे सामुदायिक वन माङसेबुङ गाउँपालिकामा पर्छ। तर त्यसको संरक्षण र भोगचलन चुलाचुली गाउँपालिकाका उपभोक्ताले गरिरहेका छन्। इलामकै टिक्रेबोटे वन माङसेबुङ गाउँपालिकामा पर्छ। यसको भोगचलन माई नगरपालिकाका उपभोक्ताले गरिरहेका
चित्रमा नयाँ नेपाल
नयाँ नेपालको प्रतिबिम्बलाई करिब एक दर्जन अग्रज र २० जना कलाका विद्यार्थीले चित्रमा उतारेका छन्। समृद्ध देशको सपनालाई रङ र कुर्चीले क्यानभाषमा कलात्मकरूपमा प्रस्तुत गरेका चित्रको प्रदर्शनी नेपाल आर्ट
विद्युत् महसुल उठाउन जागरुकता खै ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण शाखा, गोरखाले चालू आर्थिक वर्षको लाखौं बक्यौता रकम उठाउन नसकेको रहेछ। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रधिकरण गोरखा शाखाले ८० लाखभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी रहको
नेपालमा दैनिकजसो दुर्घटनाका खबरहरु आइरहेका हुन्छन्। एक त दुर्घटना आफैंमा हृदयविदारक हुन्छ, साथै दिनहुँ धेरै नेपालीले दुःखद दुर्घटनामा परी अकालमा आफ्नो प्राणको आहुति गर्न बाध्य छन्। कतै चालकको लापरबाही
विकासमा भ्रष्टाचार, कालोमोसो र भीडतन्त्र
गत महिनाको एक दिनको कुरा हो। हामी स्थानीय विकास अधिकारीकै कार्यकक्षमा बसेका थियौं। एक युवक आए। उनले स्थानीय विकास अधिकारीको टेबलमा ढ्याक्क हाने। भने– एलडीओ साप, के छ विचार
दाङका विद्यार्थीको बाध्यात्मक आन्दोलन
शिक्षा मौलिक हक हो भनेर नीतिमा लेखिएका कुराहरु सरकार किन पूरा गर्दैन ? हामी चाहन्छौं, आमनेपालीका पढ्ने उमेर भएका छोराछोरीले सहज तरिकाले पढ्नलेख्न पाउन कुनै कारणले वञ्चित नहून्। शैक्षिक
गणित शिक्षा र चुनौतीका सीमाहरु
कहिलै पुरानो नहुने थोरोको विश्वप्रसिद्ध भनाइ नै छ– ‘पुरानो कोट लगाऊ, नयाँ पुस्तक किन।’ शायद यही भनाइलाई अप्रत्यक्षरुपमा पछ्याएर पाइथागोरस, न्युटन, आर्किमिडिज आफ्नो नाम गणितज्ञका रुपमा दर्ज गर्न विश्वमै
यो त बिजोग भएन र ?
बाँसका टेका। टेकाहरुलाई फलामे तारले दरो गरी कसिएको। कसिएका तारलाई खियाले खाइसकेका। कतै–कतै त चुँडिन थालिसकेका। बाँस पनि लेउ र ढुसीले मक्किएजस्तो। यिनै बाँसका टेकाले जसोतसो त्रिपाल अडिएका छन्।
आफूले जितेका ठाउँमा मात्रै लोकतन्त्र ?
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रोल्पा–रुकुममा अहिलेसम्म लोकतन्त्र नै नआएको टिप्पणी गर्नुभएको रहेछ। काठमाडौं जिल्लाका महानगरपालिका र नगरपालिकाका निर्वाचित मेयर–उपमेयर र कार्यपालिका सदस्यलाई प्रशिक्षण दिँदै ओलीले त्यसो भनेको खबर
बासकोटालाई लाइफटाइम अवार्ड
खनाल र रानालाई सम्मान, सुवेदीलाई पत्रकारिता पुरस्कार हेटौंडामा आगामी बिहीबार हुन लागेको नवौं छायाँछवी डी सिने अवार्डअन्तर्गत यस वर्षको छायाँछवी लाइफटाइम लिजेन्ड्री अवार्ड २०७४ संगीतकार तथा गायक शम्भुजित बासकोटालाई
कुरा राष्ट्रियता र धर्म–संस्कृतिको
भारतका हिन्दु राज्यहरुलाई अंग्रेजले तहसनहस गरेर भारतलाई मुसलमानकरण र त्यसपछि इसाईकरण गर्न सक्दो प्रयास गरे तापनि भारतवर्षका कतिपय जनताले हिन्दु संस्कार र मान्यता छोड्न सकेका थिएनन्। त्यसको फल अहिले
जनप्रतिनिधिहरु हो जनताको काममा ध्यान देऊ
स्थानीय निर्वाचनमा जनताको प्रतिनिधि बनेर आएका प्रतिनिधिसँग हाम्रो ठूलो अपेक्षा छ। हामीले हाम्रो ठाउँको उचित ढंगले विकास गर्न तपाईंहरुलाई भोट दिएर जिताएका छौं। तपाईंहरु विलासिता र सामन्तीको पारा देखाएर
खडेरी र जलवायु परिवर्तन
लामो समय पानी नपर्नु नै खडेरी हो। खडेरीको अर्थ सुख्खा हुनु हो। खडेरी एउटा प्राकृतिक घटना हो, जुन मौसम र उच्च चाप प्रणालीसँग सम्बन्धित छ। खडेरी बिस्तारै प्राकृतिक प्रकोप
के हो राजपाको पारा ?
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का शीर्ष नेताहरुले सरकार र मुख्य दलले नै आफूहरुलाई निर्वाचनभन्दा बाहिर राखेको आरोप लगाएछन्। जुन दलका लागि पटक–पटक निर्वाचन सारेर हदैसम्मको लचकता अपनाइयो, उसैले बन्देज
व्यक्तिगत काममा अल्झिने सरकारी हाकिमहरू
विकसित मुलुकमा प्रायः मानिस आफू बन्नुभन्दा बढी मुलुक बनाउने सोच राख्दछन्, तर हाम्रो मुलुकमा प्रायः मुलुक बनाउनेहरू खान, पिउन, कमाउन, झगडा गर्नमा नै आफ्नो समय बिताइराखेका हुन्छन्, फलस्वरूप ढिलासुस्तीमा